June 1, 2020 - Khitalin Media
၂၀၂၀ (၆)လပို င်းမှစ၍ သင် ကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်း ကို ဒါလေးဖတ်ပြီး စစ်ကြည့်လိုက်ပါ
၂၀၂၀ (၆)လပို င်းမှစ၍ သင် ကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်း ကို ဒါလေးဖတ်ပြီး စစ်ကြည့်လိုက်ပါ (မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း မျှဝေပေးလိုက်ပါအုံး) သင့် နာမည်၊ဂုဏ်သတင်း အောင်မြင်ကျော်ကြား ၊ကြီးပွား ဖို့ ဒီလမ်းကြောင်း​တွေပေါ်နေပြီလား?သင့်မိတ်ဆွေကော? ဤလမ်းကြောင်း အားအောင်မြင်ရေး လမ်းကြောင်းဟုခေါ်ပြီး လက်သူကြွယ်၏ခြေရင်း တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ခုံအပေါ်သို့ ထိုးတက်သွားသော လမ်းကြောင်း လည်းဖြစ်သည်။ ကံလမ်းကြောင်းလည်းကောင်းမွန်နေမည် […]
ကံကောင်းလွန်းတဲ့ စစ်တွေမြို့က (၃)တန်းကျောင်းသူလေး
ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို စစ်တွေမြို့က (၃) တန်းကျောင်းသူလေး ဆွတ်ခူး ယနေ့ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် (၁၆) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှ ဆွတ်ခူးသွားပါတယ်။ စစ်တွေမြို့၊ ရွာကြီးတောင်ရပ်ကွက် ငပိန်လမ်းနေ ဦးအောင်ဆန်းဝင်းနှင့် ဒေါ်မေကြီးဖြူတို့၏ သမီး မကြည်ဖြူစင်သိန်းက ဃ ၃၁၃၁ဝ၂ […]
ယခု​မေလအတွက်​ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် . . .
ယခု​မေလအတွက်​ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ ရွာကြီးတောင်ရပ်ကွက် ငပိန်လမ်းမှမကြယ်ဖြူစင်သိန်း နှင့် မောင်ဘုန်းလင်းသူ မောင်နှမ Crd ဇင် မင်း ထွန်း unicode ယခု​မလအေတှကြ​ သိနြးတစသြောငြးခှဲ ကံထူးရှငြ ရခိုငပြှညနြယြ စစတြှမှေို့ ရှာကှီးတောငရြပကြှကြ ငပိနလြမြးမှမကှယဖြှူစငသြိနြး နှငြ့ မောငဘြုနြးလငြးသူ […]
၁၆ ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်
၁၆ ကြိမ်မြောက် သိန်တစ်သောင်းခွဲ ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန် #သိနျးတဈသောငျးခှဲ ဃ ၃၁၃၁၀၂ #သိနျးတဈသောငျး ထ ၃၄၁၂၂၂ #သိနျးငါးထောငျ ဝ ၅၇၇၁၁၄ ကဂ ၃၈၈၉၈၀ #သိနျးနှဈထောငျ ရ ၉၅၀၁၀၆ စ ၈၁၀၁၂၂ ဝ ၉၇၆၅၈၅ #သိနျးတဈထောငျ မ ၇၅၅၆၂၆ […]
16 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်မကြာသေးမီကသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ သူနဲ့သူ့အစ်ကိုတစ်ခန်းတည်းမှာပဲအိပ်နေကြတယ်။ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်အချိန်တွင်သူအော့အန်ဖို့ အခန်းမှ ထွက်သွားသည်။ သူ့အစ်ကိုက သူသည်မိမိလက်ဖြင့်မိမိပါးစပ်ကိုကိုင်ပြီးရေချိုးခန်းဆီသို့သွားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သူအန်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အသက်ရှုဖို့အခက်တွေ့နေတယ်ဟု ရှင်းပြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားတယ်။ ယခုဆရာဝန်က ဆေးစစ်ချက်အရအသက်ရှုလမ်းကြောင်းမှာအန်ဖတ်စို့ ၍ ပိတ်ခြင်းကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။ ကောင်လေးသည် သူ့အိပ်ရာ သို့မဟုတ်ကော်ဇောမပျက်စီးစေရန်အိမ်သာသို့မရောက်မှီထိပါးစပ်ပိတ် ထိန်း၍ သွားခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် မိဘတွေအနေနှင့်ကလေးတွေကို သူတို့အန်ချင်တဲ့အခါနေရာမရွေး ထိုးနှက်အန်ခိုင်းပြီးမှရေချိုးခန်းကိုသွားသင့်တယ်။ […]
(၁၆)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု)
(၁၆)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု) အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို ထီပေါက်တဲ့ အဖွားပေးခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာပါ သူဌေးမင်း ထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူ ဖော်ပြအပ်ပါတယ်။ အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်း တစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ […]